တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း နှင့် အမှတ်တရ ဆရာမ
Posted by မေဓာဝီ at 12:26 PM
A good experience ma maydar. Thanks for sharing.
မမေဒါဝီ ပြောတဲ့ ဆရာမ နှစ်ယောက်စလုံးကို သိပါတယ်။ သင်တော့ မသင်ဖူးပါ။
ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်အုန်း ဆုံးသွားပြီလား။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ၅၉ နှစ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတယ်။ ခပ်ချောချော ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ သွက်လက်တာ မှတ်မိတယ်။
ဘက်လိုက်တာဟာ မကောင်းပေမယ့် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်နေကြတဲ့လူတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါဟာ မတရားဘူး ဆိုတာကို သိတောင်မှ သိရဲ့လား ထင်ရလောက်အောင် အကျင့်ပါနေကြတယ်။ ဆရာမက လုပ်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ Professioanalism ပျောက်သွားတယ်။ အစကတည်းက သူ့တူမကို သူ့အတန်းထဲမှာ မထားသင့်ဘူး။ အဲဒီကစပြီး မှားတယ်လို့ မြင်တယ်။
ohhh,, i see, ma maydar,, u r from Latha(2) too...
6/28/2009 1:36 PM
ကျောင်းတော်က ဇာတ်လမ်းတွေ အထူး သဖြင့် ဆရာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဖြစ်အပျက် ခံစား ချက်တွေ ကျွန်တော့်မှာလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ အစ်မမေရေ .... ဟိုတလောက အသက်ရွယ်သေးတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက် လည် ချောင်း ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတယ် ကျွန်တော်တို့ကို PT သင်ပေးတဲ့ ဆရာမကတော့ အစာအိမ် ကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွားတယ် .... ကြားရတာ စိတ် မကောင်းဘူး အစ်မရာ .... ဆရာတွေ အသက် ရှည်စေ့ချင်တယ် သူတို့ တပည့်ငယ်တွေရဲ့ 
အောင်မြင်မှုတွေကို ကြည့်ရင်း ပီတိတွေ ရှည်ကြာစေ့ချင်တယ်ဗျာ
ဆရာတစ်ယောက်က တပည့်ငယ်ငယ် လေး တစ်ယောက်ကို မုန်းပြီး စကားမပြော တာ မျိုး ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေခံစားဖူးပါရဲ့.... ကျွန်တော် ကြောက်နေတယ် အစ်မရယ် ဆရာ ဂိုဏ်းတွေများ သင့်နေပြီလားလို့.... အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်မှားခဲ့ကောင်းမှားခဲ့မယ် ထင်လို့ ပါ တချို့ သောဆရာတွေရဲ့ ကျောသားရင်သား ခွဲခြားတာတွေကိုလည်း ကြားခဲ့ မြင်ခဲ့ ခံစား ခဲ့ ရဖူးပါတယ်......
ဘဝထဲက အပိုင်းအစငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့ လေ ......
အဆင်ပြေပါစေ အစ်မမေရေ ....
9/14/2009 6:39 AM
သမီးက လသာနှစ်မှာကျောင်းတတ်ခဲ့တာပါ.. ၇ တန်းတုန်းကထွက်ပြီးနိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်ခဲ့ပါတယ် ...။ တီချယ်ဒေါ်တင်တင်အုန်း အကြောင်းကိုကြားတုန်းက တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် .. သမီးတို့နှစ်တုန်းကလည်း တီချယ်က ၅တန်းအတန်းမှူးပါပဲ ... တီချယ်ဆုံးသွားတာကြာပေမယ့် သမီးအမြဲသတိယနေတုန်းပါ...
6/17/2010 1:30 PM
8/13/2010 7:31 PM